Masitaera ezhizha: nguva yekutora zvikabudura zvako kubva muwadhiropu | Bezzia
Masitaera ezhizha: nguva yekutora zvikabudura zvako kubva muwadhiropu
Maria vazquez | 07/06/2021 10:00 | Chii chandinopfeka
Zvese zvinoratidza kuti vhiki rino tichakwanisa kunakidzwa nenguva yezhizha, kunyangwe zviri pamutemo hatingapinde mwaka uno kusvika muna Chikumi 21 anotevera. Nguva yekubvisa, saka, iyo zvikabudura kana zvikabudura, kugadzira masitaera seaya atinogovana nhasi.
Zvikabudura zviri a nguvo inosangana nezhizha, kunyange paine vamwe vanoapfeka munguva yechando. Chipfeko chakanakira kunakirwa nemazuva anopisa akasanganiswa nehembe, bhurauzi kana hembe neshangu kana hembe. Iwe unoda kuziva here kuti vanozviita sei?
Semazuva ese, Muvhuro wega wega isu takashandisa maakaundi eakasiyana mafashoni instagrammers kugovana mapfumbamwe kutaridzika newe. Zvipfumbamwe zvipfeko zvezhizha ine imwechete yakajairika dhinomineta: ivo vese vanoratidzira zvikabudura kana zvikabudura.
Tinogona kukoshesa maitiro akasiyana kana tichitaura nezverudzi urwu rwemabhurugwa. Denim zvikabudura zvichiri chimwe chevanonyanya kufarirwa kana zhizha rasvika, zvisinei, gore rino iro bhurugwa rakakwirira chiuno yakagadzirwa mukati machira akareruka senge rineni. Zvakanakisa, pasina kupokana, kutarisana nemazuva anopisa.
Kana isu tichireva kune akasiyana sarudzo dzekuasanganisa iwo, isu tinofanirwa zvakare kutaura nezve maviri maitiro. Yekutanga, yekufemerwa kushoma, inotikoka kuti tivasanganise nayo Basic t-shirts kana chena hembe kana dema uye kupedzisa kutaridzika neshangu dzakapetana kana t-shirts kunyaradza kukuru.
Maitiro echipiri anotikurudzira kusanganisa zvikabudura ne shangu dzakafemerwa-bhuu kana mabhurauzi. Iwo anogona kuve mashati ane ruva anodhinda uye / kana ane echinyakare maficha senge tambo, ruffles kana kuzvitutumadza maoko. Kuti upedze kutaridzika kwako, unongoda chete shangu dzakadzika kana dzepakati-chitsitsinho, idzo dzaunonzwa kugadzikana nadzo, uye raffia accessories.
Iwe unowanzo pfeka zvikabudura muzhizha? Kana iwe unofarira kupfeka masiketi kana madhirezi kana iwe uchida kupfupika?
Mifananidzo - @whaelse, @bartabacmode, @adelinerbr, @tsangtastic, @ fleuron.paris, @collagevintage, @lionseb, @auroraartacho
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » fashoni » Chii chandinopfeka » Masitaera ezhizha: nguva yekutora zvikabudura zvako kubva muwadhiropu
Maitiro ekudzora kushushikana pamusoro pekudya
Nzira yekugadzira bharamu yemuromo